လက်သည်း၊ သူတို့ကိုကြီးလာအောင်အိမ်လုပ်ချက်ပြုတ်နည်း ၅ မျိုး။
လှပမှု	 16 မေလ 2015
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမိန်းကလေးတော်တော်များများကသူတို့ရဲ့လက်သည်းတွေအကြောင်းကိုတော်တော်များများစိုးရိမ်လာကြတယ်။ မေမေတို့ကြိုက်တဲ့စတိုင်လ်အတို၊ ဒါမှမဟုတ်စိုးရိမ်စိတ်ကိုစီးတဲ့စတိုင်ကပိုပြီးနောက်မှာနောက်ကျကျန်နေတယ်။ သူတို့ကလက်သည်းကြီးတွေကြီးချင်ပေမဲ့သူတို့ကြီးထွားဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကိုမစောင့်နိုင်ကြဘူး၊ ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့လက်သည်းကျန်းမာသန်စွမ်းမှုကိုကူညီတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုသုံးကြတယ်။ သင်၏လက်သည်းများကြီးထွားရန်ကူညီပေးသောရိုးရှင်းသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အိမ်လုပ်နည်းများကိုသိပါစေ။
လက်သည်းကိုကြီးထွားရန်ခွင့်ပြုသည်ထက်ပိုကျန်းမာရန်လိုအပ်သည်၊ ထို့ကြောင့်နေ့စဉ်အပါအ ၀ င်အချို့သောအလေ့အကျင့်များကိုပြောင်းလဲရမည်။ သို့သော်အလေ့အကျင့်များပြောင်းလဲခြင်းအပြင်အိမ်လုပ်လျှို့ဝှက်ချက်များသည်ရှည်လျားလှပ။ ကျန်းမာသောလက်သည်းများရရှိရန်ကူညီသည်။
အလွန်ရိုးရှင်း။ စျေးသက်သက်သာသာရှိသောချက်ပြုတ်နည်းသည်သံပုရာရည်နှင့်နို့ကိုသုံးရန်ဖြစ်သည်၊ ဤအိမ်တွင်မည်သည့်အရာများမရှိသနည်း။
နွားနို့ကိုသံပုရာရည် (သကြားမပါဘဲ) ရောစပ်ပြီးလက်သည်းကို ၁၅ မိနစ်စိမ်ပါ။ တစ်ပတ်ကိုသုံးကြိမ်လောက်စာရွက်ကိုအချိန်တိုအတွင်းပြန်စားတာကရလဒ်ကိုသိသာထင်ရှားစေပြီးသန်စွမ်းတဲ့လက်သည်းတွေကကြီးထွားမှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
သခွားသီးကိုအရေပြားကိုမဖယ်ရှားဘဲရိုက်ပါ၊ လက်သည်းများကိုမိနစ် ၂၀ ခန့်ကပ်ပေးပါ။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုတစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်နိုင်ပြီးရလဒ်များကိုသတိပြုမိရန်ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
၎င်းကိုသုံးရန်အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုမှာသွားနှစ်ချောင်းကိုကြိတ်ခြေပြီးသင်၏လက်သည်းပေါ်တွင် ၁၀ မိနစ်ခန့်ထားပြီးဤကုသမှုကိုနေ့စဉ်တစ်ပတ်လုပ်ပါ။ အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာ၎င်းကိုအများကြီးခုတ်ပြီးလက်သည်းဆိုးဆေးထဲသို့ထည့်ပါ
ရေတစ်ခွက်ကိုပြုတ်ပြီးသံလွင်ဆီနှစ်ဇွန်းထည့်ပြီးလက်ကိုရေနွေးထဲမှာ ၁၀ မိနစ်ထားပါ။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြီးနောက်သင်၏လက်ကိုမသုတ်ပါနှင့်၊ ထုတ်ကုန်ကိုသဘာဝအတိုင်းခြောက်သွေ့စေပါ။ ဒီစာရွက်မှာဗီတာမင် E ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။
သံပုရာသီးကဲ့သို့လိမ္မော်သီးသည်ဖောလစ်အက်ဆစ်ပါ ၀ င်သောကြောင့်လက်သည်းများကြီးထွားရန်ကူညီပေးသည်။
လိမ္မော်သီးလေးလုံးကိုညှစ်၊ ထို့နောက်ဝါဂွမ်းအပိုင်းအစများကို ယူ၍ ဖျော်ရည်၌နှစ်လိုက်ပါ။ ဂွမ်းကိုသင်၏လက်သည်းပေါ်တွင်ဆယ်မိနစ်ထားပါ။
လက်သည်းများပေါက်လာစေရန်သဘာဝဖြည့်စွက်စာ - NOVA REPAIR
ဤအချက်များနှင့်အိမ်လုပ်ချက်ပြုတ်နည်းများအပြင်၊ ငါဒီအခွင့်အလမ်းကို ယူ၍ လက်သည်းကြီးထွားမှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သောဖြည့်စွက်စာတစ်ခုနှင့်တင်ပြလိုပါသည်။ အသစ်ပြုပြင်ခြင်း။ ၎င်းသည် ၁၀၀% သဘာဝဖြည့်စွက်အားဖြင့်ရွေးချယ်ထားသောပါဝင်ပစ္စည်းများမှပြုလုပ်ပြီးသုတေသနများစွာကို အခြေခံ၍ ဖော်မြူလာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ Nova Repair သည်စျေးကွက်ထဲတွင်ရှိနေသည်မှာကြာပြီ၊ ၎င်းသည်တကယ်အလုပ်လုပ်သောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြပြီး၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်လျှင်၎င်းသည်စျေးကွက်မှထွက်ခွာသွားလိမ့်မည်။
Nova Repair ၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်သည်ဆံပင်နှင့်သက်ဆိုင်သည်၊ ဒါပေမယ့်၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်၏ဟန်ချက်ကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီသောပါဝင်ပစ္စည်းများအုပ်စုကိုထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့်လက်သည်းနှင့်အရေပြားကိုပါအကျိုးပြုသည်။ လက်သည်းနှင့်အရေပြား။
Nova Repair ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ။
Nova Repair ကို၎င်း၏တရားဝင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သော offer.novarepairoficial.com/ တွင်အင်တာနက်မှသာရောင်းချသည်။ ၀ ယ်ယူရန် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုရိုးရှင်းစွာ ၀ ယ်ယူပါ၊ သင်ပေးပို့လိုသောလိပ်စာကိုညွှန်ပြပြီးသင်၏ငွေပေးချေမှုကိုပြုလုပ်ပါ။ သင်အွန်လိုင်းစျေး ၀ ယ်အသုံးမ ၀ င်ပါကစိတ်မပူပါနဲ့၊ ဒီ site သည်နေ့စဉ်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကိုလက်ခံရရှိပြီးလုံးဝလုံခြုံသော site တစ်ခုဖြစ်သည်။
Horse Casco သည်၎င်း၏ထိရောက်မှုနှင့်ရလဒ်များကြောင့်စျေးကွက်တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာရှိနေခဲ့သောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အမှတ်တံဆိပ်တွင်လက်သည်းအခြေခံ၊ ပြန်လည်ရှင်သန်ခြင်း၊ အားကောင်းရန်၊ hypoallergenic base အပါအ ၀ င်အလွန်ပြည့်စုံသောထုတ်ကုန်လိုင်းရှိသည်။ စျေးနှုန်းအလွန်သက်သာပြီးဘရာဇီးရှိမည်သည့်ဆေးဆိုင်တွင်မဆိုသင်တွေ့နိုင်ပါသည်၊ သို့သော်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါကစျေးနှုန်းချိုသာစွာနှင့်သင်နေထိုင်သောဒေသပေါ် မူတည်၍ ချက်ချင်းပို့ဆောင်ပေးသော Drogaria Araújo ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင် ၀ ယ်နိုင်သည်။ မရ။
Horse Hoof အပြင်၊ Betalfratus သည်ကြီးထွားရန်ခက်ခဲခြင်းနှင့်အခွံမာခြင်း၊ အားနည်းသော၊ လက်သည်းခြေသည်းရှိသူများအတွက်ထုတ်ကုန်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အထုပ်တွင်ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းလက်သည်းပေါ်တွင်လိမ်းရမည့်ကြွေသားကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်အစွမ်းထက်သောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အားကောင်းရုံသာမကဆေးဝါးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားရမည်။
လက်သည်းများပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်သုံးရမည့်ထုတ်ကုန်များအပြင်၊ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ဟန်ချက်ကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီနိုင်သောအစားအစာဖြည့်စွက်အစားအစာများအကြောင်းပြောရန်လည်းစိတ်ဝင်စားသည်။ ဤဥပမာတစ်ခုအား Imecap Hair ဟုခေါ်သော်လည်းလက်သည်းကြီးထွားမှုပြဿနာရှိသူများကသုံးသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ယေဘုယျအားဖြင့်လက်သည်းအားနည်းသူများသည်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းနှင့်အခြားပြဿနာများရှိသည်။
ရေသောက်ပါ။ ရေသည်သင်၏လက်သည်းများကိုသန်မာစေခြင်းအပါအ ၀ င်အရာအားလုံးအတွက်အမြဲကောင်းသည်၊ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အားရေဓာတ်ဖြည့်ပေးသောကြောင့်ရေလက်ဖက်ရည်သည်လည်းကောင်းသည်။
စာရိုက်ခြင်းသည်သင့်ကိုကျန်းမာသောလက်သည်းများရရှိစေနိုင်ကြောင်းသင်သိပါသလား။ ဟုတ်သည်၊ စာရိုက်ခြင်း၊ စာရေးခြင်း၊ စန္ဒရားတီးခြင်းနှင့်လက်ချောင်းများပါ ၀ င်သောအခြားလုပ်ဆောင်ချက်များသည်လက်သည်းမှသွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးစေပြီးသူတို့၏ကြီးထွားမှုကိုကူညီသည်။
သင်၏လက်သည်းများကိုအသက်ရှုခွင့်ပေးပါ။ ခြယ်ထားသောလက်သည်းများသည်လှပသော်လည်း၎င်းတို့သည်အသက်ရှူရန်လိုအပ်သည်၊ ထို့ကြောင့်သူတို့ကိုသန်စွမ်းစေရန်နှင့်အဝါရောင်မှကာကွယ်ရန်လက်သည်းဆိုးဆေးမပါဘဲသူတို့ကိုနှစ်ရက်ခန့်ထားခဲ့ပါ။
ဒီနေ့အတွက်ဒါပါပဲ၊ မိန်းကလေး လက်သည်းကြီးထွားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိလိုသည်များရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားဤနေရာ၌ထားခဲ့ပါ။
အပေါ်အတွေး ၁၂၂ ခုသင်၏လက်သည်းများကိုပိုမိုမြန်ဆန်ခိုင်မာစေရန်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။ အကြံပေးချက်အချို့ကိုကြည့်ပါ။"
26:2016 pm မှာဖေဖော်ဝါရီလ 16, 27 - Edit
31:2016 pm မှာမေလ 19, 33 - Edit
အကြံဥာဏ်တွေအတွက် Oiee ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
28:2016 pm မှာဇွန်လ 14, 29 - Edit
1:2016 pm မှာဇူလိုင်လ 09, 59 - Edit
1:2016 pm မှာဇူလိုင်လ 18, 17 - Edit
ကြက်သွန်ဖြူအစွန်အဖျား၊ တိုးတက်မှုတစ်ခုရဖို့ Q ကိုငါတို့ဘယ်နှစ်ခါသုံးမလဲ။
4:2016 pm မှာဇူလိုင်လ 11, 08 - Edit
25:2016 pm မှာဇူလိုင်လ 12, 46 - Edit
26:2016 pm မှာဇူလိုင်လ 10, 55 - Edit
မင်္ဂလာပါ Gabrielle ။ စံပြသည်ဤကိစ္စတွင်လက်သည်းအတုသုံးရန်ဖြစ်သည်။
27:2016 pm မှာဒီဇင်ဘာလ 10, 04 - Edit
28:2016 pm မှာဒီဇင်ဘာလ 11, 36 - Edit
8:2016 pm မှာစက်တင်ဘာလ 07, 22 - Edit
8:2016 pm မှာစက်တင်ဘာလ 10, 15 - Edit
မင်္ဂလာပါ Ana သင်၏လက်သည်းများသန်မာစေရန်အတွက်ဖြည့်စွက်စာတစ်ခုယူခြင်းသည်သင်၏ကိစ္စတွင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်။ Nova Repair အကြောင်းသိဖို့ဘယ်လိုနေလဲ။ လက်သည်းတွေကိုဂရုစိုက်တာအပြင်ဆံပင်ကိုသန်စွမ်းတောက်ပြောင်အောင်လည်းလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ပိုမိုလေ့လာရန်အောက်ပါကိုနှိပ်ပါ။ http://bit.ly/suplemento-unhas-cabelos
17:2016 pm မှာစက်တင်ဘာလ 01, 59 - Edit
17:2016 pm မှာစက်တင်ဘာလ 12, 19 - Edit
မင်္ဂလာပါငါသခွားသီးနဲ့သံပုရာရည်နဲ့နွားနို့သုံးပြီးအစပိုင်းမှာ ft အရွယ်အစားဘယ်လောက်ရှည်လာလဲဆိုတာသိချင်ခဲ့တယ်။
19:2016 pm မှာစက်တင်ဘာလ 11, 52 - Edit
ဒါကမင်းရဲ့လက်သည်းကြီးထွားမှု၊ မင်းရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ မင်းလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေစတာတွေပေါ်မှာမူတည်လိမ့်မယ်။ စည်းကမ်းမရှိဘူး။
26:2016 pm မှာစက်တင်ဘာလ 14, 24 - Edit
မင်္ဂလာပါ! ငါ့လက်သည်းတွေပေါက်ဖို့ ၁၁ ရက်ပဲ ပိုသင့်တော်တဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းရှိပါသလား။
26:2016 pm မှာစက်တင်ဘာလ 15, 09 - Edit
Esther ကြည့်ပါ။ မင်းသူတို့ကိုကြီးထွားဖို့ဘယ်လောက်လိုလဲ၊ ဒီနေ့မင်းရဲ့လက်သည်းဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်။ လက်သည်းအတုသုံးဖို့စဉ်းစားဖူးလား။ ငါဒီ template ကိုသုံးပြီးပြီ။ http://bit.ly/unhas-posticas-modelo-testado ၎င်းသည်အသုံးပြုရအလွန်လွယ်ကူပြီး၎င်းတို့သည်လက်သည်းပေါ်တွင်တစ်ပတ်ကျော်ကြာခဲ့သည်။
အားဖြည့်ထုတ်ကုန်များကို သုံး၍ ကြိုးစားနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်မင်းကမင်းလိုချင်တဲ့အရွယ်အစားမဟုတ်ဘူးလို့ထင်နေသေးရင်လက်သည်းအတုသုံးပြီးစမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ငါဒီ model ကိုစမ်းသပ်ပြီးပြီ။ http://bit.ly/unhas-posticas-modelo-testado ကောင်းလိုက်တာ! ၎င်းတို့သည်အလွန်သဘာဝကျပြီးလက်သည်းပေါ်တွင်တစ်ပတ်ကျော်ကြာသည်။
ပျော်စရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပါ fernanda ဒါပေမယ့်ငါ့လက်သည်းကိုက်တာကိုငါမရပ်နိုင်ဘူး
5:2016 pm မှာနိုဝင်ဘာလ 00, 29 - Edit
8:2016 pm မှာနိုဝင်ဘာလ 20, 47 - Edit
ကျွန်ုပ်၏လက်သည်းများသည်ကြီးထွားရန်အချိန်ကြာမြင့်ပြီး၎င်းကြီးထွားလာသောအခါ၎င်းသည်ကျိုးပဲ့သွားပြီး facel ကိုအခွံခွာသည်
12:2016 pm မှာနိုဝင်ဘာလ 20, 20 - Edit
23:2016 pm မှာနိုဝင်ဘာလ 13, 20 - Edit
OLA FERNANDA ငါ OLIVIA မှရေနှင့်ဆီကိုပိုမြန်စေမည်၊ သို့သော်၎င်းသည် LA စတင်ချိန်ဓာတ်ပုံ LA ၏အရွယ်အစားဖြစ်လာရန်ရက်ပေါင်းမည်မျှကြာလိမ့်မည်နည်း။
24:2016 pm မှာနိုဝင်ဘာလ 12, 25 - Edit
မင်းဘယ်နှစ်ကြိမ်လုပ်လဲ၊ မင်းရဲ့လက်သည်းတွေကြီးထွားမှုကောင်းလားဆိုတာပေါ်မူတည်တယ်။ သင့်တွင်အရေးတကြီးလိုအပ်ချက်ရှိပါကလက်သည်းအတုရှိရန်စံပြဖြစ်သည်။ ငါဒီ model ကိုစမ်းသပ်ပြီးပြီ။ http://bit.ly/unhas-posticas-modelo-testado.
28:2016 pm မှာနိုဝင်ဘာလ 00, 29 - Edit
လက်သည်းကြီးကြီးလိုချင်သူတွေ၊ သူတို့ရဲ့လက်သည်းကိုက်လေ့ရှိတဲ့သူတွေအတွက်ပိုသင့်တော်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးပြုပြီးငါ့ကိုကူညီပါ၊ ငါအများကြီးကြိုးစားပြီးပြီ၊ ငါ့အမေကလက်သည်းအတုသုံးတာကိုခွင့်မပြုဘူး၊ ဘာတွေလဲငါမသိဘူး မလုပ်ချင်တော့ဘူး၊ ငါကျောင်းနှစ်ကုန်မှာပြဇာတ်တစ်ပုဒ်လုပ်မယ်၊ ငါ့သံချောင်းကြီးတွေလိုတယ်
2:2016 pm မှာဒီဇင်ဘာလ 17, 11 - Edit
မင်္ဂလာပါငါလက်သည်းတွေကိုစားတယ်ဒါပေမယ့်ဒီ vrz ငါသူတို့ကိုမစားဖို့ကြိုးစားနေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်ငါသူတို့ကိုတစ်လမှာဘယ်လိုကြီးထွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့မေးချင်ခဲ့တယ်။ ??????? ????????????????????????
26:2016 pm မှာဒီဇင်ဘာလ 18, 35 - Edit
၁၀ မိနစ်ခန့် (ကြက်သွန်ဖြူချက်ပြုတ်နည်းတွင်) မင်းလက်ကိုဆေးလို့ရမလား၊ မင်းလက်သည်းပေါ်မှာထားခဲ့လို့ရမလား။
9:2017 မှာဇန်နဝါရီလ 09, 23 - Edit
11:2017 မှာဇန်နဝါရီလ 20, 45 - Edit
မင်္ဂလာပါ၊ သင်ကြက်သွန်ဖြူအနည်းငယ်ကိုခြေရင်း၌ထည့်လျှင်၎င်းသည်သင်၏လက်သည်းများကိုသန်မာကြီးထွားစေသည်ကိုထောက်ကူသည်မှန်ပါသလား။ အကြံဥာဏ်တွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ : 3
11:2017 မှာဇန်နဝါရီလ 20, 47 - Edit
ကလေးအဆီဖုသည်သင်၏လက်သည်းများကိုသန်မာစေရန်လည်းကောင်း၊ မိန်းကလေးများ =] #နေပါ။
12:2017 မှာဇန်နဝါရီလ 15, 08 - Edit
အေးဂျင့်က pipin ဖျော်ရည်ထဲမှာရေထည့်လား၊ ဒါမှမဟုတ် blender နဲ့ရိုက်တာလားငါသိချင်ခဲ့တယ်။
12:2017 မှာဇန်နဝါရီလ 17, 30 - Edit
12:2017 မှာဇန်နဝါရီလ 15, 21 - Edit
28:2017 မှာဇန်နဝါရီလ 14, 08 - Edit
ဖာနန်ဒါ pfv ငါ့ကိုကြက်သွန်ဖြူအစွန်အဖျားကကူညီပေးသလား။
31:2017 မှာဇန်နဝါရီလ 16, 16 - Edit
29:2017 မှာဇန်နဝါရီလ 15, 00 - Edit
ဗွီဒီယိုမှာငါတို့ကတစ်နေ့ကို ၃ ကြိမ်သုံးသင့်တယ်၊ ငါအဲဒါကိုထပ်မသုံးခင်အဲဒါကိုဖယ်ပစ်မလား၊ ဒါမှမဟုတ်အခြားအလွှာတစ်ခုထပ်လိမ်းရမလားဆိုတာငါသိချင်ပါတယ်။
31:2017 မှာဇန်နဝါရီလ 15, 32 - Edit
မင်္ဂလာပါ၊ ငါ့လက်သည်းတွေကြီးထွားသန်မာလာအောင်ကူညီတဲ့အရမ်းကောင်းတဲ့ဂျယ်လ်ကိုငါသုံးတယ်၊ အဲဒါ Locycare ပါ၊ မင်းရဲ့လက်သည်းတွေကိုတစ်နေ့နှစ်ကြိမ်သုံးမယ်၊ အဲဒါကိုလက်သည်းဆိုးဆေးနဲ့ဆိုးလို့ရမလားဘဲ၊ ငါလက်သည်းဆိုးဆေးကိုကျော်လိုက်မယ်၊ မင်းရလဒ်ရလိမ့်မယ်။ ! ငါလက်သည်းတွေကိုအားကောင်းစေပြီး cuticle တွေကိုအစိုဓာတ်ဖြည့်ပေးဖို့ဒီထုတ်ကုန်ကို Granado ဆီနဲ့အစားထိုးလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်စံပြကတော့ခိုင်မာတဲ့အရာတွေကိုသုံးပြီးလက်သည်းတွေကိုအပတ်တိုင်းလုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါ့လိုလက်သည်းကိုက်တဲ့သူတွေကသူတို့ကိုကြီးထွားစေနိုင်တယ်၊ မင်းလက်သည်းအတုသုံးရင်ရလဒ်ကလှတယ်၊ ဒါပေမယ့်အားပျော့နေလို့ကြီးထွားဖို့ပိုကြာတယ်။ အနည်းဆုံးငါနှင့်အတူဖြစ်သည်။ အနမ်း
31:2017 မှာဇန်နဝါရီလ 16, 15 - Edit
7:2017 pm မှာဖေဖော်ဝါရီလ 11, 59 - Edit
မင်္ဂလာပါ၊ ကုန်လွန်သောနေ့ရက်များတွင်ဟင်းချက်နည်းအသစ်တစ်ခုပြုလုပ်ရန် (သို့) တစ်ပတ်၏သုံးရက်ကိုသင်သုံးနိုင်သလား။
7:2017 pm မှာဖေဖော်ဝါရီလ 17, 32 - Edit
27:2017 pm မှာဖေဖော်ဝါရီလ 15, 03 - Edit
19:2017 pm မှာပြီလ 13, 59 - Edit
19:2017 pm မှာပြီလ 14, 01 - Edit
ကြိတ်ထားသောကြက်သွန်ဖြူကိုသွားတိုက်ဆေးတွင်ရောမွှေ ??? ပြီးတော့မိနစ်ဘယ်လောက်ထားခဲ့လဲ
24:2017 pm မှာပြီလ 12, 34 - Edit
မင်္ဂလာပါ Fernanda! ငါ့လက်သည်းကိုတစ်ပတ်အတွင်းကြီးထွားဖို့ဘာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုသင်ထောက်ခံပါသလဲ။ သူမသည်တိုးတက်မှုကောင်းမွန်သည်။ ငါ့လက်သည်းကပျော့လာပြီးကွေးညွတ်လာပြီးဘေးဘက်မှာကျိုးပဲ့နေပြီးလက်သည်းအတုကိုသုံးမရဘူး။
25:2017 pm မှာပြီလ 01, 04 - Edit
ငါဗွီဒီယိုမှာပါတဲ့အခြေခံအချက်၊ နို့နဲ့ရေနဲ့သံပုရာချက်ပြုတ်နည်းတွေကိုသုံးလို့ရမလား၊ သုံးခုစလုံးကိုသုံးတာပြဿနာရှိလား။
25:2017 pm မှာပြီလ 11, 37 - Edit
Camila ကိုတစ်ချိန်တည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်စံပြကတော့မင်းအတွက်ဘယ်ဟာကအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတစ်ချိန်မှာတစ်ခုလုပ်ဖို့ဘဲ။
7:2017 pm မှာမေလ 07, 32 - Edit
2:2017 pm မှာဇွန်လ 11, 09 - Edit
နို့နဲ့သံပုရာချက်နည်းကိုငါလုပ်မယ် ... အဲဒါအရည်လား၊ အမှုန့်လား ???
20:2017 pm မှာဇွန်လ 17, 00 - Edit
20:2017 pm မှာဇွန်လ 17, 01 - Edit
1:2017 pm မှာသြဂုတ်လ 12, 27 - Edit
သင်လည်းရှာလကာရည်ကို သုံး၍ လက်သည်းပေါ်တွင် ၃ မှ ၅ မိနစ်နေနိုင်ပါသလား။ မင်းထွက်ဖို့အခက်အခဲရှိလား။
30:2017 pm မှာသြဂုတ်လ 11, 23 - Edit
Jühh Souza (ဂျူလီယာ)
2:2018 မှာဇန်နဝါရီလ 19, 01 - Edit
ငါအကြံပေးချက်များကိုကြိုက်တယ် !! ငါလက်သည်းတွေအများကြီးကိုက်ဖူးတယ်၊ သွေးတောင်ထွက်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီနေ့တော့ငါဒီအလေ့အထကိုစွန့်လွှတ်လိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲဒါကတစ်လလောက်ရှိပြီ။ ဒီနေ့ငါ့လက်သည်းတွေကနည်းနည်းပိုရှည်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါနှစ်ပေါင်းများစွာဝါးလာခဲ့တာကြောင့်သူတို့ကအားနည်းနေတုန်းပဲ။ ငါ့လက်သည်းတွေကိုမကိုက်ဘဲနဲ့ငါအသက်မရှင်နိုင်ဘူးလို့ငါတွေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်မင်းကိုအမှန်အတိုင်းပြောဖို့ကသိပ်မခက်ပါဘူးဆိုတာငါသဘောပေါက်ခဲ့တယ် ... ❤
2:2018 မှာဇန်နဝါရီလ 19, 04 - Edit
ခွင့်လွှတ်ခြင်း။ သူတို့ဘာမှမပြောခင်မှာငါအဓိပ္ပါယ်မဲ့တဲ့အသည်းကွဲစာကိုငါရေးခဲ့တယ် ????
28:2018 pm မှာဒီဇင်ဘာလ 20, 19 - Edit
မင်္ဂလာပါငါ့မှာငါသုံးနေတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်၊ အဲဒါကသံပုရာရည်နဲ့သခွားသီးကိုမင်း Peninos ကိုအရေပြားနဲ့ရိုက်လိုက်ပြီးသခွားသီးဘယ်လောက်ထည့်သလဲပေါ်မူတည်ပြီးသံပုရာသီးအနည်းငယ်ထည့်ပါ။ ဒါကအထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်❤
Detox အစီအစဉ် - Rosi Feliciano နှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျသည်။ အဆင်ပြေတယ်?
Chiropractic: ဒါကဘာလဲ။ အကျိုးကျေးဇူးများကားအဘယ်နည်း။ ဒီ session ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ
Boldo လက်ဖက်ရည် - အကျိုးကျေးဇူးများအားလုံးကိုယခုရှာဖွေကြည့်ပါ
Egg Diet: ဒီနေရာမှာဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ menu စိတ်ကူးကိုသုံးပါ။ ထွက်ခွာသည်!